नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : चित्र बहादुर केसी मात्र एउटा यस्ता नेता देखिए जो सधैं साँचो कुरा मात्र बोल्छन ! प्रधानमन्त्री ओलीलाई डा. शंकर शर्माले पनि यस्तो सुझाब दिए !
चित्र बहादुर केसी मात्र एउटा यस्ता नेता देखिए जो सधैं साँचो कुरा मात्र बोल्छन ! प्रधानमन्त्री ओलीलाई डा. शंकर शर्माले पनि यस्तो सुझाब दिए !